बैशाख १२ त्यो कालो दिन : भूकम्पपीडित अझै पनि पालमुनी ! - Nepal's Online News
बैशाख १२ त्यो कालो दिन : भूकम्पपीडित अझै पनि पालमुनी !
खोटाङ, १२ बैशाख । विनाशकारी भूकम्प गएको आज तीन वर्ष पूरा भएको छ । २०७२ साल वैशाख १२ गते गोरखाको बारपाक केन्द्र विन्दु भएर ७.८ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो । त्यसपछि वैशाख १३ गते र २९ गते सिन्धुपाल्चोक र दोलखा केन्द्रविन्दु भएर गएका ठूला परकम्पले १४ जिल्लामा ठूलो क्षति पु-याएको थियो ।
भूकम्पमा झण्डै ९ हजार नागरिकले ज्यान गुमाएका थिए भने हजारौं घाइते भएका थिए । ७ लाख ६७ हजार घर भत्किएका थिए भने ७ सय ५३ वटा पुरातात्विक संरचनामा क्षति पुगेको छ । तर भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कामले खास्सै गति लिन सकेको छैन । भएका कामले पनि विभिन्न बहानामा गति लिन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पपछिको यो तीन वर्षमा लक्ष्यलिएको मध्ये पुनर्निर्माणको काम आधा मात्रै सकिएको छ ।
भूकम्पले खोटाङमा पनि क्षति पु-यायो, त्यो महाभूकम्प र पराकम्पनका कारण घर बिहिन बनेका जिल्लाका ८ हजार ४४३ घर परिवारले हालसम्म पनि आवास निर्माण पूरा गर्न सकेका छैनन् ।
कहिले प्राविधिहरु नआएको समस्या त कहिले आवासवापतको रकम समयमा निकास नदिएको समस्याका कारण भूकम्पपीडितहरु तीन वर्षदेखि कष्टकर जीवन निर्वाहा गर्दै आएका छन् । जिल्लाका भूकम्पीडितहरुले पहिलो किस्तावापतको रकम पाएर पनि आधा घर निर्माण गरेका छन् । तर समयमा प्राविधिकहरु गाँउ– गाउँमा नपूगेका कारण उनिहरुलाई दोस्रो किस्ता वापतको रकम लिन सकस परेको छ ।
बिदेशमा रहेका घरमुलीको नाममा आवास अनुदान सम्झौता गरेका, आवास अनुदान सम्झौतापछि बिदेसिएका, अनुदान सम्झौतापछि मृत्यु भएका, बुढेसकालका कारण सदरमुकाममा रहेको बैंकसम्म आउन नसक्ने लगायतका समस्याका कारण कतिपय भूकम्प पीडित परिवारले हालसम्म आवास अनुदान वापतको पहिलो किस्ता पाउन सकेका छैनन् ।
तथापि पनि भूकम्पबाट कम प्रभावित १७ जिल्लामध्ये खोटाङमा सवैभन्दा बढि आवास अनुदान वितरण भएको दाबी गरिएको छ । लाभग्राहीलाई पहिलो किस्तामा ५० हजार, डिपिसिको काम सकिएपछि दोश्रो किस्तामा १ लाख ५० हजार र छाना हाल्ने बेलामा तेश्रो किस्तावापत ७ ५ हजार तथा शौचालय निर्माणपछि २५ हजार रकम खातामा उपलव्ध गराइने भनिएको छ । भूकम्पका कारण खोटाङमा १३ हजार ७९९ घरमा क्षती पुगेको तथ्यांक छ ।